खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई तीन-तीन लाख जरिवाना – Sandesh Press
May 29, 2021 551
खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई तीन-तीन लाख जरिव हसंरक्षण विभागले खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई कारवाही गरेको छ । केही दिनयता बजारमा खाने तेलको मूल्यमा अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको
गुनासो आएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन भएको तेल उद्योगको अुनगमनका क्रममा मङ्गलबार बारामा सञ्चालित दुई उद्योगले मूल्य बढाएको भेटेपछि कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको जनाइएको छ ।
यो पनि,एजेन्सी । नुहाएपछि हाम्रो शरिरको केही हिस्साको छाला खुम्चिने गर्छ। हात, हत्केला, औलाको छाला धेरै बेर पानीमा रहँदा खुम्चेर चाउरिएझै हुन्छ।आखिर यसको कारण के हो ?
अमेरिकी वैज्ञानिक मार्क चान्गिजी भन्छन् कि हाम्रो शरिर बदलियको वातावरण अनुसार आफुलाई पनि परिवर्तन गर्दछ। पानीमा छाला चाउरी पर्नु पनि त्यहि हो, कि हामी चीजहरुलाई ठिक ढंगले समाउन सकौं। सन् २०११ मा मार्केले एक अनुसन्धानको क्रममा यस्तो विशेषता बाँदरमा पनि भेटेका थियो।खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई तीन-तीन लाख जरिव हसंरक्षण विभागले खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई कारवाही गरेको छ । केही दिनयता बजारमा खाने तेलको मूल्यमा अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको
Prevधनलाभ हुनुअघि देखिन्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस
Nextमृत्युअघि मान्छेको शरिरमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ ?
भोलि तीन दिनसम्म सार्वजनिक बिदा
डिभोर्स भैसकेकी पूर्व पत्नीलाई कोठामा पुगेर ……